Okhiye Abakhiywe Emotweni Ubani Okufanele Ashayele? - I-Sparky Express®
Okhiye Abakhiye Emotweni Ozofona
February 26, 2022 UDanny Popen
Okufanele Ukwenze Uma Ukhiyela Okhiye Bakho Emotweni
Uma ungeyena umkhandi wezikhiye ezizenzakalelayo oke wavula izimoto ngaphambilini ngaphandle kokhiye, sincoma kakhulu ukuthi ushayele umuntu ofanelekela ukwenza lo msebenzi, noma uhlole ezinye izinketho.
Ingabe unokhiye oyisipele ndawana thize?
Zama ukukhumbula uma unokhiye oyisipele. Mhlawumbe ukhiye wemoto oyisipele usendaweni ohlala kuyo, noma omunye umuntu uyakwazi ukufinyelela kukhiye wakho oyisipele futhi akulethele wona. Ungase ulahlekelwe isikhathi uzama ukuthola lowo khiye oyisipele, kodwa uma uqhathanisa nezindleko zokuyilungisa uma ulimaza isimiso sokukhiya imoto yakho, umzimba wakho noma uma uhlephula ingilazi, uzobe wonga inqwaba yemali. Uma usukhiyele okhiye emotweni, thula bese uzama ukuthola ukuthi ukuphi lowo khiye oyisipele.
Ingabe ukhavwe ngohlelo losizo lomgwaqo?
Hlala wazi uma unanoma yiluphi uhlobo usizo lomgwaqo ukufakwa kwemoto yakho. Uma wenza kanjalo, vele ushayele umhlinzeki wakho wosizo oseceleni komgwaqo ucele usizo. Ngokuvamile, ubulungu bakho bufika nenani lezingcingo zesevisi zamahhala. Ngakho-ke kuleso simo, inkampani izothumela umuntu ofanelekayo ukuthi avule imoto yakho mahhala.
Awufakwanga wuhlelo losizo lomgwaqo?
Kulokhu, ungase ufune ukwenza izingcingo futhi uthole amanani kubahlinzeki abazimele abaseceleni komgwaqo, noma izinkampani ezidonsayo. Insizakalo idinga okhiye abakhiywe emotweni bahlinzekwa cishe yibo bonke abashayeli bamaloli okudonsayo noma izikhiya zokukhiya ezizenzakalelayo, ukuze uthole umuntu uvule imoto yakho ngokuphepha.
Ingabe izingane, abantu abangaphenduli, abadala, noma izilwane ezifuywayo nazo zikhiyelwe ngaphakathi emotweni?
Uma kukhona okhiyelwe ngaphakathi emotweni futhi izicabha zemoto zingakwazi ukuvuleka, shayela ku-911 ngokushesha. Ungathathi noma yimaphi amathuba.